PU Akpụkpọ anụ Akpụkpọ anụ, Ndị na -ebubata ya - China PU Ndị na -emepụta akpụkpọ anụ
Onye na -emepụta akpụkpọ anụ PU Vegan maka akwa ụgbọ ala
Na mmalite mmepe nke teknụzụ akpụkpọ anụ PVC, ụlọ ọrụ akpụkpọ anụ sịntetik ụlọ dị n'azụ Europe. Mana n'ime nyocha na ntinye nke akpụkpọ anụ sịntetik PU, anyị na -agbaso usoro teknụzụ mba ụwa site na mmalite, mmalite mmalite, ọsọ ngwa ngwa, wee bụrụ ebe etiti akpụkpọ anụ PU na China.
Ikwado ndabere na-enweghị mkpuchi ejiri Pu akpụkpọ anụ enweghị nchekwa
PU akpụkpọ anụ sịntetik, n'ihe banyere usoro kemịkalụ, ọ dị nso na akpụkpọ anụ eke, yabụ na ọ gaghị esi ike ma na -emebi emebi, ma n'otu oge ahụ nwere uru nke agba mara mma na ọtụtụ usoro.
Microfiber akpụkpọ anụ PU maka ụgbọ ala, oche ụgbọ ala anaghị egbochi mmiri, nchekwa ụgbọ ala
Site na mmepe ngwa ngwa nke teknụzụ akpụkpọ anụ sịntetịkị (polyurethane), ụfọdụ ụdị nke ụdị mba ụwa ejirila nwayọọ nwayọọ malite iji akpụkpọ anụ sịntetik PU wee na -enwekarị anụ ahụ PU akpụkpọ anụ.
Eco-Enyi na Enyi Polyurethane Vegan Akpụkpọ anụ Akụrụngwa PU
Ihe mkpuchi ụgbọ ala PU Akpụkpọ anụ Polyurethane Akpụkpọ anụ adịgboroja
Akpụkpọ anụ PU bụ ihe eji emepụta sịntetị nke mmadụ mere ya nwere udiri akpụkpọ anụ, siri ike ma sie ike, dịkwa ọnụ ala.
China na -enye Red Pu akwa akpụkpọ anụ akpaaka ịchọ mma
Akpụkpọ anụ sịntetik pu microfiber na -edobe njiri mara akpụkpọ anụ dịka iku ume, ịmịkọrọ mmiri, nro, wearable na ntụsara ahụ, wdg Anyị na -enye ihe karịrị agba iri abụọ maka nhọrọ gị.
Microfiber na -akwado PU Akpụkpọ anụ dị elu maka ọrịre
Ọ nwere ezigbo ike ọdụdọ na obere okpomọkụ, ezigbo nguzogide ịka nká na nkwụsi ike hydrolysis.
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ kacha mma PU kacha mma
Akụkụ okpukpu abụọ PU Polyurethane Sịntetik Akpụkpọ anụ na -enweghị mmiri
PU microfiber sịntetik akpụkpọ anụ, iji gboo mkpa ndị mmadụ maka ịdị mma na nkasi obi nke ihe dị n'ime, gụnyere ihe ndị dị n'ime na -adị nro, dị mma maka mmetụ aka na -egbu maramara, ụkpụrụ na atụmatụ ụgbọ ala niile na nkwekọ.
Akpụkpọ anụ sịntetik PU dị elu maka ịchọ mma n'ime ụgbọ ala
PU akpụkpọ anụ nwere ike gboo mkpa nchekwa gburugburu ebe obibi, mgbe mkpofu ihe eji arụ ụgbọ ala agaghị emetọ gburugburu, enwere ike imegharị ya.
Onye na -ebubata akpụkpọ anụ PU ihe eji emepụta ihe
Ihe ọhụrụ ụgbọ ala PU nwere ezigbo ihe nrụpụta igwe, nguzogide hydrolysis, nguzogide ọkụ, nguzogide ọxịdashọn na mgbochi na -eyi ihe ejirila ya n'ọtụtụ ebe nchekwa ụgbọ ala, oche, ndị nche ọnụ ụzọ na akụkụ ndị ọzọ.